Qaybtaan waxay ku saabsan tahay xuquuqda qofka macmiisha ahi leeyahay, haddii tusaale ahaan an doonayo in ka dacwoodo shay ama an ka noqdo iibsi. Waxaa jira xeerar ku saabsan xuquuqda qofka macmiisha ah uu leeyahay iyo waajibaadka saaran.
Warbixin dheeraad ah waxaa laga akhrisan karaa boggaan: www.konsumentverket.se
Waxbixintu waxay ku qoran tahay afaf kala duwan.
Haddii shay la iibsaday uu kharaab yahay ama hawl la dalbaday aysan shaqayneyn wuxuu qofku xaq u leeyahay in uu ka noqdo shayga uu iibsaday. Kolka qofka shay cusub ayaa la siiyaa ama loo hagaajiyaa. Marmar waxaa dhacda in qofka lacagta loo celiyo.
Xaq’qa in laga noqdo, waxaa la samayn karaa, saddex sano oo laga soo bilaabo maalintii shayga la iibsaday. Lixda bilood oo ugu horreeya gudahood waa in iibiyuhu caddeeyaa in aan shaygu qalad lahayn markii la iibsanayey. Dib uga noqoshada waa in la soo gudbiyaa laba bilood gudahood oo laga soo bilaabo maalintii qaladka la arkay.
Qofka wax iibsaday waa in uu layimaadaa risiit ama wax caddaynaya inuu shayga ka iibsaday dukaanka iyo qiimihii uu ku iibsaday iyo taariikhda la iibsaday.
Shaygu wuxuu ku jiraa caymis ka yar saddex sano laakiin taasi ma soo gaabineyso waqtiga ka noqoshada sida sharciga ku qoran.
Iib furan micneheedu waxa weeye in lacagta laguu soo celin karo haddii aad ka noqoto iibsiga shay.
Mase ahaan khasan in qofka wax iibinaya ku weyddiiyo in aad dooneyso iibsi furan. Haddii uu iibiyuhu kugu deeqo iib furan isaga ayaa qabanaaya in waqtiga iibsiga furani le’ekaanayo. Warqadda risiidka ayeyna ku taal xeerarka dukaanku leeyahay, laakiin weyddii iibiyaha haddii aadan hubin.
Xaqa iska beddelka
Dukaamada qaarkood ma bixiyaan iib furan, laakiin waxay qofka wax iibsada siiyaan inuu xaq u yeesho inuu iska beddelo shayga uu iibsaday. Taas micneheedu waxa weeye in shaygii la iibsaday la celin karo oo lagu beddelan karo mid kale. Qofka wax iibinayaa wuxuu kaloo bixin karaa warqad mar dambe aad dukaanka wax uga iibsan karto. Waana ikhtiyaar in iibiyuhu uu ku siiyo inaad xaq u yeelato shayga aad iibsatay iska beddeli karto.
Waxaa mar walba wanaagsan in la kaydiyo risiidka qofka la siiyo kolka uu wax iibsanayo. Waxaana risiidka ku qoran inaad iib furan ama xaqa iska beddelka iyo waqtiga la haysto. Waxaa kaloo halkaa ku qoran in shaygu garantii leeyahay. Waxaana risiidka loo baahnaan karaa haddii la doonayo in iibka laga dacwoodo ama la isticmaalo iib furan ama xaqa iska beddelka.
Waa maxay “moms”?
(Vad är moms?)
Dhammaan alaabta iyo adeegga la iibsado waxaa weheliya moms oo micneheedu yahay canshuur. Moms wuxuu u taagan yahay mervärdes- och omsättningsskatt oo micneheedu yahay canshuurta qiimaha dheeraadka ah iyo qiimaha waxa la iibinayo oo la isku daray, waana canshuur la siiyo dowladda. Canshuurtaas waxaa mar walba lagu xisaabiyaa qiimaha shayga, waxayna ku qornaan kartaa risiidka. Canshuurta cuntadu waxa weeye boqolkiiba 12, canshuurta waxyaalaha kalena waxa weeye boqolkiiba 25 qiimaha shaygu joogo.
Maamulka degmada waxaa jooga shaqaale dadka siiya talooyin iyo warbixino ay ka mid yihiin:
Ka dacwoodka shayga iyo adeegga
Iibsashada alaabta qaaliga ah sida baabuurta iyo qalabka guriga
Iibsiga hawlaha adeegga oo ay ka mid noqon karaan, waxyaalaha heshiiska ku qornaan, haddii tusaale ahaan loo yeerto qof farsamayaqaan ah.
Xuquuqda qofka macmiisha ahi leeyahay iyo waajibaadka saaran
Dhaqaalaha guriga, sida habka loo qoro isticmaalka iyo qaybinta dakhliga.
Haddii la doonayo in la la xiriiro lataliyaha macmiisha waxaa talefoon loo diri karaa maamulka degmada ama waxaa la isticmaali karaa bogga Internet-ka degmada.
Guddiga ashtakooyinka macmiisha
Hay’adda Allmänna reklamationsnämnden, ARN, waxay shaqadeedu tahay in ay xalliso khilaafka ka dhasha waxyaalaha la kala iibsanayo. Khilaafka iibsigu wuxuu noqon karaa in qofka macmiisha ah iyo kan iibiyaha ahi ay ku heshiin waayey, qalad laga arkay shay la iibsaday.
Qofka macmiisha ahi wuxuu ashtakadiisa u qoranayaa ARN, muddo lix bilood gudahood ah oo laga soo bilaabo maalinta khilaafku dhacay.
Waxaa warbixin dheeraad ah laga akhrisan karaa boggaan: www.arn.se
Waxay warbixintu ku qoran tahay af iswiidhish sahlan iyo afaf kale.